ဟဒီးဆ်: အမိန့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် တံစိုးလက်ဆောင်ပေးသူနှင့် တံစိုးလက်ဆောင်ယူသူအား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) က ‘လအ်နသ်’အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကရုဏာတော်မှကင်းဝေးစေရန် မကောင်းဆုတောင်းတော်မူခဲ့သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အမိန့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် တံစိုးလက်ဆောင်ပေးသူနှင့် တံစိုးလက်ဆောင်ယူသူအား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) က ‘လအ်နသ်’အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကရုဏာတော်မှကင်းဝေးစေရန် မကောင်းဆုတောင်းတော်မူခဲ့သည်။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။ . တရားသူကြီး၏ ကျင့်ဝတ်များ။ .
အဗူဟုရိုင်ရဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အမိန့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် တံစိုးလက်ဆောင်ပေးသူနှင့် တံစိုးလက်ဆောင်ယူသူအား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က ‘လအ်နသ်’အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကရုဏာတော်မှကင်းဝေးစေရန် မကောင်းဆုတောင်းတော်မူခဲ့သည်။
လာဘ်ပေး၊လာဘ်ယူ ပြုခြင်း၏အရင်းမူလသည် လိမ်လည်လှည့်ဖျားရန်အတွက် ငွေကြေး၊ဥစ္စာပစ္စည်းတို့အားသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။ လာဘ်ပေး၊လာဘ်ယူ ပြုခြင်းသည် တစ်ဦးချင်းစီနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးအား ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေသည့်အတွက် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က လာဘ်ပေးသူ၊ လာဘ်ယူသူတို့အား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကရုဏာတော်မှ ကင်းဝေးစေရန် မကောင်းဆုတောင်းတော်မူခဲ့သည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပြုခြင်းသည် ခြွင်းချက်မရှိဟရာမ်ဖြစ်သည်။ ဤဟဒီးဆ်တော်၌ အမိန့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် လာဘ်ပေး လာဘ်ယူလုပ်ခြင်း ကိစ္စရပ်ကိုသာ သီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းမှာ အမိန့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပြုခြင်းသည် ရှရီအသ်တရားတော်၏ အမိန့်ပညတ်ချက်များကို အပြောင်းအလဲလုပ်ရန် ဖြစ်သောကြောင့် အလွန်ကြီးလေးသော အကုသိုလ်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် လာဘ်ပေးသူ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အမိန့်ဆုံးဖြတ်ချက်အားပြောင်းလဲပေးရန် သို့မဟုတ် လျှော့ပေါ့ပေးရန်အတွက် တရားသူကြီးအား ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
လာဘ်ပေးခြင်း၊လာဘ်ယူခြင်း၊ ကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အကူအညီပေးခြင်း စသည်တို့သည် လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုတွင် ရိုင်းပင်းကူညီခြင်းဖြစ်သောကြောင့် တားမြစ်ထားသည်။
လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ ပြုခြင်းသည် ကြီးလေးသောအပြစ်အကုသိုလ်ကြီးများတွင် ပါဝင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က လာဘ်ပေးသူနှင့် လာဘ်ယူသူတို့အား ‘လအ်နသ်’အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ကရုဏာတော်မှ ကင်းဝေးစေရန် မကောင်းဆုတောင်းတော်မူခဲ့သည်။ ထိုသို့‘လအ်နသ်’မကောင်းဆုတောင်းခြင်းသည် ကြီးလေးသောအပြစ်အကုသိုလ်ကြီးများ အတွက်သာ သီးသန့်ဖြစ်သည်။ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူပြုခြင်း ဟရာမ်ဖြစ်ကြောင်း သာသနာ့ပညာရှင်များအားလုံး တညီတညွတ်တည်း လက်ခံထားကြသည်။
တရားစီရင်ရေးနှင့် အမိန့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရေးတို့၌ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ ပြုခြင်းသည်အလွန်ကြီးလေးသော အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီး အလွန်ဆိုးရွားသော ဒုစရိုက်မှုလည်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့ပြုခြင်း၌ မမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့် လူတို့၏ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုစားသုံးခြင်း၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြောင်းလဲပစ်ခြင်းနှင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ထုတ်ပြန်ပို့ချတော်မူခြင်းမရှိသော အရာများဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ လာဘ်စားသူသည် လာဘ်စားခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိညှဥ်းဆဲခြင်းဖြစ်ပြီး တရားလိုနှင့် တရားပြိုင်နှစ်မျိုးစလုံးအပေါ် မတရားမှုပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။ . တရားသူကြီး၏ ကျင့်ဝတ်များ။ .